रोशी, तेमाल र नमोबुद्धको क्वारेन्टाईनमा भारतबाट फर्किएका नागरिक! कुन पालिकामा कती? हेर्नुहोस् – Radio Roshi
रोशी, तेमाल र नमोबुद्धको क्वारेन्टाईनमा भारतबाट फर्किएका नागरिक! कुन पालिकामा कती? हेर्नुहोस्
in रोशी खबर / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	May 31, 2020
यश कुमार परियार–जेठ १८,
जिल्लाको रोशी, तेमाल गाउँपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकाको क्वारेन्टाईनमा भारतबाट फर्किएका नागरिक बस्न थालेका छन् । नेपाल भारत सिमा नाकामा कडाईका बाबजुत लुकिछिपि नेपाल प्रवेश गरेका, भारतको क्वारेन्टाईनमा बसेर नेपाल प्रवेश गरेका र पछिल्लो समय सरकारले नै भारतबाट नेपाली नागरीकको उद्दार गर्ने जनाए लगतै नेपाल आएका नागरिकहरुलाई प्रशासनले स्थानिय तहमा पठाउने गरिएको छ ।
रोशी गाउँपालिकामा १२ जना आईपुगेः
भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा रोकिएका काभ्रेली धमाधम जिल्ला फर्कने क्रममा रोशी गाउँपालिकामा पनि १२ जना आईपुगेका छन् । उनिहरु भारतबाट फर्किएका रोशी गाउँपालिकाको नागरिक हुन् । उनिहरुलाई धुलिखेल स्थित सञ्जीवनी माविको क्वारेन्टाईन बसेका थिए । उनिहरु रोशीको नागरिक भएका कारण आफ्नै पालिकामा ल्याईएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक गंगालाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनिहरुमध्ये ४ जनालाई मंगल जनविजय मावि मंगलटारको क्वारेन्टमा राखिएको छ भने ८ जनालाई लक्ष्मी नारायण मावि शिखर आमबोटेमा राखिएको छ । उनिहरु रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ६, १० र तेमाल गाउँपालिकाको १ जना रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । क्वारेन्टाईनमा रहेका मध्ये ५ जनाको पिसिआर बिधि मार्फत कोरोना परिक्षण भईसकेको र रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । त्यस्तै बाँकि रहेका ७ जनाको पनि छिट्टै कोरोना परिक्षण गरीने तयारी भएको स्वास्थ्य संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यी मध्ये ५ जना सञ्जीवनी माविको क्वारेन्टाईनबाट र अन्यलाई भारतबाट उद्धार गरिएको उनको भनाई छ । उनिहरु सबैलाई १४ दिन क्वारेन्टाईनमा राखेर कोरोना परिक्षण (पिसिआर) गराएपछि मात्रै घर पठाईने स्वास्थ्य संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
गाउँपालिकामा हाल ७५ वेड संख्या भएको क्वारेन्टाईन तयारी अवस्थामा छ । जसमा मंगल जनविजय मावि मंगलटमरमा ५० र लक्ष्मी नारायण मावि शिखर आमबोटेमा २५ वेड संख्याको क्वारेन्टाईन रहेको छ । क्वारेन्टाईन वेड संख्यालाई १ सय पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए । गाउँपालिकामा अहिले ३ वटा एम्बुलेन्स संचालनमा रहेको छ ।
तेमाल गाउँपालिकामा ५ जनाः
जिल्लाको तेमाल गाँपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाईनमा पनि भारतबाट फर्किएका ५ जना रहेका छन् । उनिहरुलाई वडा नम्बर ५ को क्वरेन्टाईन्मा १, वडा नम्बर ४ मा १ र वडा नम्बर ८ मा ३ जना रहेका छन् । उनिहरु भारतबाट फर्किएका तेमालका नागरिक हुन् । उनिहरुको पिसिआर परिक्षणमा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ अर्थात कोरोना नभएको देखिएपछि आफ्नो आफ्नो वडामा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाईनमा राखिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक शिवहरी पाठकले जानकारी दिए ।
यस अघि उनिहरु ५ जनालाई धुलिखेलको सञ्जीवनी माविमा रहेको क्वारेन्टाईनमा राखिएको थियो । उनिहरु सबैलाई १४ दिन क्वारेन्टाईनमा राखेर घर पठाईने संयोजक पाठकले बताए । गाउँपालिकामा हाल १ वटा एम्बुलेन्स संचालनमा छ । गाउँपालिकामा अहिले १ सय ४ वेडको क्वारेन्टाईन रहेको छ । गाउँपालिकाले हरेक वडामा ११/११ बेडको क्वारेन्टाईन निर्माण गरिसकेको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकामा भारतबाट फर्किएका ११ जनाः
जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले स्थापना गरिएको क्वारेन्टाईनमा ११ भारतबाट फर्किएका नमोबुद्ध नगरका नागरिक रहेका छन् । उनिहरु सबै धुलिखेलको सञ्जीवनी माविको क्वारेन्टाईनमा थिए । उनिहरुलाई त्याहाँबाट ल्याएर वडा नम्बर ४ स्थित जनक माविको क्वरेन्टाईमा राखिएको छ ।
भारतबाट फर्किएका मध्ये आज वडा नम्बर ५ का एक जनाको पि.सि.आर. परिक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ अर्थात कोरोना नदेखिएपछि घर पठाईएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोला प्रसाद चापाँगाईले जानकारी दिए ।
यस अघि २ जनाको पिसिआर परिक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाईएको थियो । हाल क्वारेन्टाईनमा बस्नेको संख्या १० जना रहेको छ । क्वारेन्टाईनमा रहेको १० जनाकै मंगलबार स्वाब संकलन गरी पठाईने र पिसिआर परिक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाईने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चापाँगाईले जानकारी दिए । अहिले नगरपालिकाको वडा नं ४ जनक क्याम्पसमा १८ वेडको क्वारेन्टाईन् रहेको छ भने थपेर ५० पुर्याउने लक्ष्या रहेको उनको भनाई छ । नगरपालिकामा १ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको छ ।